Soo dejisan Vimeo 1.1.42 – Vessoft
Qeybta: Fiidiyowga internetka
Bogga rasmiga ah: Vimeo
Vimeo – software ah si aad u eegto diiwaanka video adeegga Vimeo ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan videos kamarada ama dooro kan hadda jira iyo in Customize horyaalka, sharaxaad, tags, ama asturnaanta. Vimeo u saamaxaaya in ay soo saari, tirtirto ama videos geliyaan si ay u adeega. Software The kuu ogolaanayaa inaad caleenta maktabadda weyn ee videos, iyaga qiimee iyo subscribe to quudintooda. Vimeo awood u diiwaanka ay ku darto liiska ay mar kale la daawado, share video via codsiyada kala duwan, waxay u arkaan comments iyo gudbin warar.
Daawo diiwaanka video adeegga Vimeo ah
Abuuritaanka iyo configuring of video
Computer-videos on adeegga
Kartida aad u wadaagaan videos via codsiyada
Soo dejisan Vimeo
Faallo ku saabsan Vimeo
Vimeo Xirfadaha la xiriira
Dailymotion – mid ka mid ah adeegga fiidiyaha ugu caansan oo leh saldhig weyn oo ka kooban waxyaabo kala duwan. Software-ka wuxuu leeyahay mashiin wax baadi gooba oo karti u leh iyo awooda uu ku geliyo fiidiyowyada kumbuyuutarka.
software The si aad u eegto movies iyo TV muujinaysaa online in qeexitaanka sare. software The u saamaxaaya in ay soo bixi content warbaahinta xawaare sare.
software ah in soo bixi ama si aad u eegto movies oo taxane ah oo noocyo kala duwan oo online. software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay isticmaalka fudud ee adeegga.